Anatolia Mpaghara Anyanwụ | | RayHaber | raillynews
Pịa na obodo na map ka ị gụọ akụkọ banyere ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala Eastern Eastern Anatolia Region!
Mgbalị ezughi oke na Gọvanọ Erzurum Airport Memiş Angered
Mmeghachi omume sitere n'aka Gọvanọ Memiş na enweghi ike nke sistemụ "CAT 3A" na ọdụ ụgbọ elu Erzurum: Anyị ga-ezute DHM General Directorate na Ministry of Transport na akụrụngwa, ma gosipụta ọnọdụ ahụ, na-abawanye igwe ọrụ na ndị ọrụ ebe ahụ. [More ...]
Onye ozi kwusara site na ụlọ ọrụ Elazig: A ga-arụcha ụlọ n’ụlọ n’afọ 1
Onye Minista gburugburu gburugburu na obodo mepere emepe institutionlọ akwụkwọ ahụ gara nzukọ nhazi ọrụ a na-arụ n'ụlọ ebe a na-ewu ụlọ na Bizmişen District dị n'etiti kọntaktị ya na Elazig, gara n'ụlọ nlele ahụ na saịtị ahụ wee nata ozi banyere ọrụ a rụrụ. Ekem ke obio [More ...]
Minista na-ahụ maka ụlọ nyocha na-enyocha ụlọ ala ọma jijiji na Malatya
Minister nke gburugburu na obodo mepere emepe, Murat Kurum, kwuru na ha na-achọ imezu mgbanwe puku ụlọ 300 kwa afọ, "Ebumnuche anyị bụ ịgbanwe ụlọ nde 5 na ọkara na eburu oke ọsọ na afọ ise." kwuru. Minista Minista nke Malatya [More ...]
Kamil Koç Bus Inc., anọwo na-eje ozi kemgbe 1926 ma bụrụ ụlọ ọrụ njem njem njem Turkey kacha ochie. Ọ bụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-eme ka afọ ojuju ndị ahịa na ọkwa dị elu site na izute ihe ndị ahịa chọrọ. Ndị ọchị [More ...]
Ngalaba Anyị adịghị emegheere ndị na - azụ ahịa ahịa
N'ihi nchọpụta, nchedo, nnabata na njikwa nke ndị dike anyị na-arụ na ọnọdụ ihu igwe na ala niile, awa 24 kwa ụbọchị, ehihie na abalị, ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ego nke òtù ndị na-eyi ọha egwu. [More ...]
TCDD Tasimacilik bụ ihe na-achọ ịmata ihe mgbe ọrụ ụgbọ oloko nke Eastern Express, Touristic Eastern Express na Van Lake Express, bụ ndị a kwụsịrị n'ihi ọrịa coronavirus, ga-amalite. Obi ụtọ nke ndị njem, ndị na-ese foto na ndị na-eme egwuregwu [More ...]
Ministri nke ime obodo mara ọkwa: Ebibiri Organizationtù Ndị Na-eyi ọha egwu PKK nke Çemçe Group
Dabere na nkwupụta nke Minista ime, na Çemçe district nke Kars-Kağızman district, Çemçe ọnụ na ndị na-eyi ọha egwu 29 na-akwado ọrụ ikuku site na Gendarmerie Commandos, na 30-2020 Eprel 7, yana ndị na-eyi ọha egwu bụ ndị kewara. [More ...]
MOTAŞ na-aga n'ihu na-ewepu bọs na trambuses
Latgbọ ala ụgbọ ala na tratta MOTAŞ nke MlatAŞ, nke ọtụtụ puku mmadụ na-ebu kwa ụbọchị, ehichala ma hichaa ya mgbe njem ikpeazụ gachara wee kwado maka ọha na eze na-esote ụbọchị. [More ...]
Onye isi oche nke TCDD Tasimacilik gara n'ihu na-ebugharị ngwongwo na ikike dị elu n'oge oge azụmahịa Copa-19 na-emetụta n'ụzọ na-adịghị mma. Nke kachasị ogologo ma dị ogologo oge kachasị kemgbe akara Baku-Tbilisi-Kars ghọrọ arụ ọrụ n'ọnwa gara aga. [More ...]
Councillọ Mgbakọ Na-ahụ Maka Njikọ nke Turkey Na Nzuko Video, Baku-Tbilisi-Kars Railway gosipụtara na ridlọ Multimodal Transport Kwesịrị Activerụ Ọrụ, Bido Site na Tashkent, Nke mbụ Site na Tashkent-Aktau-Baku-Tbilisi-Kars-Istanbul [More ...]
Obodo Van Metropolitan mebisịrị ụgbọala ya site na kesaa ihe mkpuchi maka obere obere ụgbọ ala na ndị ahịa ụgbọ ala ọha nke onwe onye na-enye ọrụ njem ụgbọ njem ọha na eze n'ime obodo nke usoro coronavirus. Ọrịa coronavirus, na-emetụta ụwa dum [More ...]
Onye isi ala Sekmen gara nzukọ Summit
Maazị Erzurum nke ime obodo Mịnịsta Mehmet Sekmen zutere Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu site na usoro ọgbakọ vidiyo. AK Party Erzurum nọchiri anya Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, [More ...]
Alparslan Türkeş Boulevard mụbara dịka Ọpụpụ 4 na mbata anọ
Malatya Obodo ukwu nke sitere n'aka Alparslan Türkeş Boulevard dị n'etiti mgbanwe, mgbanwe na ọrụ mmeghari ohuru. Na-abawanye ọrụ ya n'ọhịa n'oge oge ụbọchị ọ bụla na-alọta, ụzọ o mere na mbelata mgbasa mgbasa [More ...]
Ọrụ Malitere Ọzọ na Kars Logistics Center
Site na mmeghe nke owuwu a na isticslọ Ọrụ Njikọ, nke e guzobere na mpaghara dị puku mita 400 na Kars na atọrọ ntọala ya na Eprel 7, 2017, ọrụ ahụ malitere ọzọ. Afọ atọ gara aga na-esote Kars Ahaziri Usoro Mpaghara [More ...]
TCDD ga - eme ka a gbasaa n'ọgụ agha megide ahịhịa na okporo ụzọ
The Republic of Turkey State Railways (TCDD), dị ka a na nkwupụta si General Directorate nke ụbọchị n'agbata April 24 2020-7 May 2020; Ahịhịa a na-alụ n'okporo ụzọ dị n'etiti Malatya-Diyarbakır-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Van-Kapıköy, Malatya-Çekinkaya na Malatya-Narlı. [More ...]
Obodo Elazig hazigharị oge nhazi bọs
Obodo Elazig rụzigharị oge bọs; Obodo Elazig mere nhazi ọhụrụ n'oge njem nke ọha na eze n'ime usoro nje oria nje Corona. Ruo 24 Eprel 2020 n'ime usoro nhazi ahụ [More ...]
Ahịrị bọs ga-arụ ọrụ na Curfew na Malatya Kpebisiri
Latgbọ njem ụgbọ njem Malatya na Ọha Ọha na Motaş AŞ. Tọzdee, 23.04.2020 - 26.04.2020 Maka ndị njem ụgwọ ka ha rụọ ọrụ na oge ezumike na Sọnde, usoro ụfọdụ akọwapụtara maka ọrụ izu ụka. [More ...]
Ọzụzụ ọmụmụ ọcha na ụgbọ ala nke ọha na Elazig
Obodo Elazig na-agba mbọ maka ọrụ ụgbọ njem na-adịghị ize ndụ yana usoro ndị ewerere maka ụmụ amaala na-eji ụgbọ njem ọha. Ọchịchị Elazig na-aga n'ihu n'usoro iji chebe ahụike nke ụmụ amaala pụọ ​​na ntiwapụ nke nje Corona. [More ...]
N'ịkọwa na ebu ka ebuga ya na obodo nwanne Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan na Uzbekistan site na okporo ụzọ Baku Tbilisi-Kars, Minista Karaismailoğlu kwukwara na ụgbọ oloko kacha ogologo na-ebu ibu kachasị kemgbe mmalite nke ụzọ BTK [More ...]
Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu kwuru na ahia mba ofesi nke ọtụtụ mba emebiwo n'ime usoro nke usoro ọgbọ ọhụrụ Corona (Covid-19). Turkey na-ewere ihe niile anya, ụmụ mmadụ dị ka contactless okporo ígwè [More ...]
A na-arụpụta Masters nde 2 kwa ụbọchị na Malatya
Onye isi obodo nke Obodo ukwu Selahattin Gürkan, iji gboo mkpa masks na oke na mpaghara Malatya nke mbụ na nke abụọ, iji gbasaa ọrịa ahụ na mba anyị. [More ...]
A na-ebugharị ibu site na ụgbọ oloko na-enweghị kọntaktị mmadụ
Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Karaismailoğlu, na-ekwupụta na egbochila usoro njem na mpaghara na mpaghara ụzọ ụgbọ oloko n'etiti ọghọm nke ọrịa Coronavirus (Covid-19), “Ya mere, ka a na-egbochi usoro ndị njem n'ụgbọ okporo ụzọ anyị, a na-ahapụ ike ekenyela maka ụgbọ njem ibu. [More ...]